Ndị Ojiegbe Awakpòla Ụlọọrụ Nchekwa Ọzọ n'Anambra - Igbo News | News in Igbo Language
Ndị Ojiegbe Awakpòla Ụlọọrụ Nchekwa Ọzọ n'Anambra
May 11, 2021 - 18:03 Updated: May 30, 2021 - 12:37
Ka ọ gachara abalị ole na ole ha jiri wakpòchaa Ichida dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Anaọcha na Awka-etiti dị n'okpuru ọchịchị ime obodo 'Idemili South' nke steeti Anambra, ndị ojiegbe ezu a maghị ndị ha bụ nọkwara na nsonso a wee wakpò ụlọọrụ ndị nchekwa obodo ọzọ na steeti ahụ.
Mwakpò ahụ bụ nke ndị ọjọọ a mere n'ụlọọrụ ndị nchekwa obodo dị n'Ọzụbụlụ, n'okpuru ọchịchị ime obodo Ekwusigo na steeti ahụ, ma bụrụkwa nke ha sitere na ya wee gbagbuo mmadụ anọ n'ebe ahụ, nke gụnyere ndị ọrụ nchekwa obodo ahụ, ndị ótù onye n'ime ha bụ osote onyeisi ndị ọrụ nchekwa ahụ, onye a maara dịka G.O.D.
Akụkọ kọrọ na ọdachi ahụ dapụtara ụbọchị ụka, malite oge o jiri ọkara gaa elekere anọ nke mgbe, wee ruo n'ihe dị ka elekere isii nke mgbede ahụ.
Dịka ụfọdụ ndị ọnọmgbeomere siri wee kọwaa, ndị ojiegbe ahụ jiri ụlọala 'Toyota Sienna' wee wụchaa ebe ahụ na mgbede ahụ, ma malite ịgba égbè aghara aghara, nke sitezịrị na ya wee gbagbuo mmadụ atọ ahụ.
Ndị ahụ mebìsìkwara ụfọdụ ihe n'ebe ahụ, kpọghèpù ndị a kpọchiri n'ụlọ nga ebe ahụ; otu onye n'ime ndị mkpọrọ ahụ sokwàrà ha wee pụọ, ebe ndị ọzọ rìkwàzịrị mbọmbọ ọsọ.
Akụkọ kọkwàrà na ndị omekoome ahụ gakwàrà ịwakpò ògige ndị uweojii dịkwa nso n'ebe ahụ; mana ndị uweojii ahụ kwèchììrì, buso ha agha, ha wee gbaa ọsọ. Mana ha mụnyèkwàrà ótù ụgbọala ndị uweojii ọkụ n'ebe ahụ, tupu ha larie.
N'okwu ya banyere mwakpò ahụ, Onyeisi ndị ọrụ nchekwa obodo n'Ọzụbụlụ, bụ Maazị Jude Ọnọnuju mèrè ka a mara na ihe ahụ bụ eziokwu, ma mee ka a mara na ọ nọghị n'ụlọọrụ ahụ mgbe ahụ ihe ahụ mere.
O kwuru na ọ na-echè na ọ bụ ndị òtù ótù onye n'ime ndị ahụ a kpọchiri n'ụlọọrụ nchekwa ahụ bịàrà mwakpò ahụ, maka na ọ bụ ka ọ gachara ihe dịka nkeji iri abụọ na ise ya bụ nwoke jiri zachaa òkù ekwentị ka ndị omekoome ahụ jiri wụchaa n'ebe ahụ ma kpaa àgwà ọjọọ ahụ.
O kwuru na ya bụ òkù ekwentị nwoke ahụ kpọrọ bụ ndị ga-abịa ibinye aka n'akwụkwọ iji gbapụta ya ka ọ kpọrọ ma gwa ha ebe ọ nọ kpọkwem, bụ nke mezịrị o jiri gbaa onye ọbụla ngharị etu ndị ahụ siri wụchaa ebe ahụ n'oge adịghị anya o jiri zachaa ekwentị ahụ.
Na mbụ n'ozi ọ kụpụụrụ ndị ntaakụkọ, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uweojii na steeti ahụ, bụ DSP Ikenga Toochukwu kwuru na mwakpò ahụ mere eme n'ezie, ma kwuo na ọ bụ n'ime mgbede ka ndị ahụ jii wee bịa na n'ụlọọrm ndị uweojii ahụ.
O kwùkwàrà na ha ka na-eme nnyòcha banyere okwu ahụ, iji nwụchikọọ ndị aka ha dị n'arụrụọụala ahụ.
Akụkọ kọrọ na ọdachi ahụ dapụtara ụbọchị ụka, malite oge o jiri ọkara gaa elekere anọ nke mgbede, wee ruo n'ihe dị ka elekere isii nke mgbede ahụ.
Dịka ụfọdụ ndị ọnọmgbeomere siri wee kọwaa, ndị ojiegbe ahụ jiri ụgbọala 'Toyota Sienna' wee wụchaa ebe ahụ na mgbede ahụ, ma malite ịgba égbè aghara aghara, nke ha sitezịrị na ya wee gbagbuo mmadụ anọ ahụ.
N'okwu ya banyere mwakpò ahụ, Onyeisi ndị ọrụ nchekwa obodo n'Ọzụbụlụ, bụ Maazị Jude Ọnọnuju mèrè ka a mara na ihe ahụ bụ eziokwu, ma kọwaa na ọ nọghị n'ụlọọrụ ahụ mgbe ahụ ihe ahụ mere.
O kwuru na ọ na-echè na ọ bụ ndị òtù ótù onye n'ime ndị ahụ a kpọchiri n'ụlọọrụ nchekwa ahụ bịàrà mwakpò ahụ, maka na ọ bụ ka ọ gachara ihe dịka nkeji iri abụọ na ise ya bụ nwoke jiri zachaa òkù ekwentị ka ndị omekoome ahụ jiri wụchaa n'ebe ahụ ma kpaa mkpamkpa ahụ.
Na mbụ n'ozi ọ kụpụụrụ ndị ntaakụkọ, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uweojii na steeti ahụ, bụ DSP Ikenga Toochukwu kwuru na mwakpò ahụ mere eme n'ezie, ma kwuo na ọ bụ n'ime mgbede ka ndị ahụ jii wee bịa na n'ụlọọrụ ndị uweojii ahụ.
O kwùkwàrà na ha ka na-eme nnyòcha banyere okwu ahụ, iji nwụchikọọ ndị aka ha dị n'arụrụala ahụ.
Ndị Gọvanọ Ndịda Anyanwụ Enweela Ọgbakọ Izugbe n'Asaba
Ọgụ Ndị Otu Nzuzo: Ndị Uweojii Ejidela Mmadụ Abụọ n'Anambra
Izunna Okafor Mar 29, 2021 0
Obianọ Ekwela Nkwà Ịkwàdo Ndị Ụka, Dịka Dayọsiisi Awka...
Izunna Okafor May 10, 2021 0
Ọgwụ Ike: NDLEA Anwụchiela Mmadụ Ise n'Abuja
Izunna Okafor May 9, 2021 0
Mmadụ Abụọ Alapụla Ọnwụ, Dịka Ụgbọala Abụọ Kwòkọrọ Isi...
Chidi Igwe May 25, 2021 0
Chidi Igwe Dec 29, 2011 0
Chidi Igwe Oct 30, 2017 0
Soludo Akpọkuola Ndị Ntorobịa Ka Ha Na-Esonyesi Ike Na...
Izunna Okafor May 17, 2021 0
N'Anambra, Otu Onye Awụpụla n'Ụgbọala na-Aga Aga, Nwụọ
Izunna Okafor Dec 15, 2021 0
FRSC Anambra Emerùbela Ụbọchị Nchekwa Okporoụzọ Na Mba...